EyeDwarha. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela | Uncwadi lwangoku
EyeDwarha. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Oktobha iza ezininzi kwaye zilungile iindaba zoncwadi ukujongana nekwindla ngeyona ndlela intle. Kwaye kuba akunakwenzeka ukuba uqokelele zonke, kunjalo Ukukhetha kwam izihloko ezi-6. Inoveli mnyama, udidi, inoveli zembali okanye ibali umntwana Ukujongana nepati zeKrisimesi ezingekho kude kangako.
1 Imfihlo yabapheki-uSara Penner
2 Ukusweleka ngo-Novemba-uGuillermo Galván
3 Ihagu yeKrisimesi-uJK Rowling
4 Lordemano - uJosé Zoilo
5 Theodora, iChrysalis yaseByzantium-Jesús Maeso de la Torre
6 IBlacksad 6 - Yonke into iyawa (Inxalenye yokuqala) -uJuan Díaz Canales noJuanjo Guarnido
Imfihlelo yokuthambisa - USara Penner
USara Penner ngumbhali waseMelika oqala kulo nyaka kwinoveli akunakuba ubukrelekrele ngakumbi. Ngoku sifika apha esi sihloko sokuqala esele siguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-40 kwaye sele sicwangciselwe ukulungelelaniswa komabonwakude.
Ekuqaleni siya ku XNUMXth century London, apho kukho ikhemesti efihliweyo Nella, umfazi ongaqondakaliyo, onamahemuhemu okuba anike ityhefu ekwimo yamayeza kwabo bafuna ukuyisebenzisa kumadoda abaphatha kakubi. Kodwa xa umntu okhuselweyo, intombazana eneminyaka eli-12 ubudala, yenza impazamo ebulalayo, ikamva lakhe liyancitshiswa ziziphumo eziza kuhlala kangangeenkulungwane.
Kulo ngoku, umbhali-mbali onqwenelekayo ogama lingu UCaroline parcewell Uchitha iminyaka elishumi etshatile yedwa. Kodwa uya kufumana umkhondo wokusombulula ukubulala okubangel 'umdla okwenzeka eLondon ngaphezulu kweminyaka engamakhulu amabini eyadlulayo. Kwaye ikamva likaCaroline noNella liya kudibana kwindalo yonke yeemfihlelo, impindezelo kunye neendlela abanokusindisana ngazo bobabini, nangona isithintelo sexesha.
Ukufa ngoNovemba - UGuillermo Galvan
Emva koko Ixesha lokucheba y Intombi eyiNtombi yaMathambo, Iyabuya UCarlos Lombardi, Ke abo bethu boyiswa leli polisa laseMadrid lasemva kwemfazwe lenziwe UGuillermo Galvan sinethamsanqa.
Ngoku kusizisa NgoNovemba 1942, kunye neMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ngasemva kunye neSpain, kuxinzelelo olupheleleyo, oluzele iintlola. ILombardi ibuyile Madrid kwaye usinde ngokusemandleni akho iarhente yomcuphi. Ke ngekhe uwuphelise nawuphi na umsebenzi kwaye kuya kufuneka uphande kwaye ulandelele umthengisi ohamba-hambayo waseJamani.
Kwangaxeshanye unqwenela ongumdlali wegama elithandabuzekayo ubonakala ebulewe kwaye amapolisa awanamdla wokufumanisa ukuba yintoni ebangela oku. Kwaye uLombardi naye uya kubanjwa kwimeko yakhe, apho kungasweleki khona iyelenqe lokuthengisa ngomzimba, i-cinema kunye nemarike emnyama.
Ihagu yeKrismesi -UJK Rowling
Ukurola kubuyela ku Ihlabathi labantwana Ngeli bali leKrisimesi lakwangoko elijolise ukuba libe lelosapho luphela, hayi abantwana kuphela.
Umlinganiswa ophambili ngu Umnwe, eyona nto yokudlala ayithandayo Jack, elahlekileyo ngomhla we Busuku benzolo. Kodwa kuba bubusuku obukhethekileyo bemimangaliso, i izinto zokudlala zibuyela ebomini. Kwaye leyo inikwe uJack, ihagu entsha yeKrisimesi (indawo kaDito), iyakuqhekeza icebo eliyingozi: olo hambo lomlingo lokuzama ukubuyisela kwakhona kwaye ugcine lowo wayengumhlobo osenyongweni kaJack.
Lordemano - UJose Zoilo
Emva kwetrilogy Las Cenizas de Hispania kunye Igama likaThixo, ezilishumi elinambini UJose Zoilo ngale noveli ngoku ineVikings.
Sikwinkulungwane ye-XNUMX kwaye UHrolf ragnallson ushiye eyakhe ENorway Inzalelwane ukuze ihlale nosapho lwayo kude e-Erin, apho iya kuba yindoda khona. Kananjalo, njengowamazibulo, uya kuba noxanduva lokubamba uKhozi lwezaqhwithi kwaye akhokelele amadoda akhe kweminye imimandla ukuze afumane ubutyebi nodumo. Kwaye baya kubeka amehlo abo UAl Andalus. Phambi kokuba bafike kunxweme lwe Gallecia ngenjongo yokuphanga abakufumanayo kwindlela yabo ngaphandle kobunzima. Kodwa abayazi loo nto URamiro, ukumkani wase-Asturian, Ugqibe kwelokuba alwe. Umkhosi weViking woyisiwe kwaye IHrolf ifakiwe liqela lama-Asturians. Uba likhoboka kwaye ubizwa ngokuba ngu "Lordemano", ke kuya kufuneka enze konke okusemandleni ukuze aphile.
Theodora, iChrysalis yaseByzantium - NguYesu Maeso de la Torre
Elinye lamagama amakhulu enoveli yezembali yile UYesu Maeso de la Torre, oqala lo msebenzi mtsha. Ngeli xesha kusisa eConstantinople ngo-548, apho uKumkanikazi uTheodora, umfazi ka-Emperor Justinian, esandula ukusweleka kubunzima babantu bakhe. Kwaye olilela kakhulu uNasica el Hispano, olona thenwa linamandla enkundleni.
Uye wamkhapha kubomi bakhe bonke obuzonwabisa kwaye uya kuthatha isigqibo sokubhala ibali eliyinyani likaTeodora, umfazi okrelekrele kangaka, okrelekrele kwaye onentliziyo enkulu, kodwa engenakuphikiswa kwaye enamandla xa ebefanele ukuba njalo.
I-Blacksad 6-Yonke into iyawa (Icandelo lokuqala) - UJuan Diaz Canales y UJuanjo Guarnido
Yinto ehlekisayo yonyaka, ngaphandle kwamathandabuzo, ngakumbi ngakumbi kubalandeli abaninzi - phakathi kwabo endizibala ndizinikele- koku Ikati yomcuphi we-anthropomorphic ukusuka kwi-50s ebizwa UJohn blacksad. Eyakho isavenge sesithandathu, Yonke into iyawa, eyinxalenye yokuqala yeli bali litsha. Ibe Iminyaka emi-8 yokulinda kunye nokunye okuninzi kubonwe kwangaphambili kwenxalenye yesibini. Kodwa yindlela esebenza ngayo le hlobo lwama-albhamu, ikhathalelwe kwaye ihlonitshwa njengoko le saga yenziwe ngumdwebi wekhathuni kunye nombhali wesikrini uJuanjo Guarnido noJuan Díaz-Canales.
Ngeli xesha sinoBlackad ngaphakathi ENew York, apho azongena kumhlaba wakhe ongaphantsi nakwimigangatho ephezulu yezopolitiko neyezemali kwelinye ibali endiqinisekile ukuba bazosazi kancinci kwaye bazosenza sibe mfutshane kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » EyeDwarha. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela
I-Helena Tur. Udliwanondlebe nombhali weGazi elibi